IZiko leeMbasa ze-Expo- iFlorida yeHlabathi yeHlabathi yeMiboniso
Wamkelekile kwiziko leMbasa yePlayFlorida Expo. IZiko lamaBhaso lenzelwe ukukhuthaza ukusebenzisana phakathi kwabakhoyo kunye nababonisi kwaye linikezela amabhaso kwabo babonise elona nqanaba liphezulu lokuthatha inxaxheba kuMboniso. Njengomboniso obhalisiweyo okanye undwendwe olubhalisiweyo, sele ungene kumncintiswano, kodwa ukuthatha kwakho inxaxheba kukhetho. Ukudlala, gqibezela yonke imiceli mngeni kuluhlu olungezantsi. Umceli mngeni ngamnye ogqityiweyo uya kukufumanela amanqaku. Abadlali abanamanqaku amaninzi ekupheleni kwempumelelo ye-Expo. Umceli mngeni uza kuqala nge-16 kaMatshi ukuya kwi-18. Abaphumeleleyo baya kwaziswa ngo-Matshi 18, 2021 ekugqityweni kwe-Expo.
Amabhaso oMdlali abaThathu aPhezulu (3):
Ibhaso le-1- $ 750.00 iAmazon Card Card ihlawulwe kwiiDola zaseMelika.
Ibhaso le2nd- $ 500.00 Amakhadi eSipho eAmazon ahlawulwe kwiiDola zaseMelika.
Umvuzo we-3- $ 250.00 Amakhadi eSipho eAmazon ahlawulwe kwiiDola zaseMelika.
Imiceli mingeni ekufuneka igqityiwe
Phumelela amanqaku ngokugqibezela oku kulandelayo:
Fumana amanqaku angama-50 ngomzuzu ngamnye womxholo wevidiyo obukeleyo.
Fumana amanqaku angama-40 ngokunqakraza kwiqhosha ngalinye, iividiyo kunye nolunye ulwazi olunxulumene nomboniso.
Jonga iindawo zokuhlala kwindawo yonke kwaye ucofe kwindawo yokuloba ukuze ushiye ulwazi lwakho loqhakamshelwano. Fumana amanqaku angama-25 kwibhokisi nganye etyelelweyo.
Fumana amanqaku angama-150 kwibhokisi nganye yewebhu oyibonileyo iyonke.
Fumana amanqaku angama-25 ngokunqakraza kwilogos nganye enxulumene neelogo, iividiyo kunye neekhathalogu.
Sijonge phambili ekuthatheni inxaxheba!